ထူးချွန်သူတို့ လျှောက်လှမ်းရာလမ်း – Shwe Canaan
March 20, 2017 Shwe Canaan ဆောင်းပါး 0
မကြာသေးမီ အချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်သည် ပြင်း
ပြသော ဆာငတ်တောင့်တမှုရှိသည့် လူတို့ အား
အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြုစုတည်ဆောက် ပေးလျက်ရှိ
ပါသည်။ ထိုလူတို့အား ဘုရားသခင်နှင့် နက်ရှိုင်း
စွာ ရင်းနှီးသိကျွမ်းလိုသူများ၊ ဘုရားသခင် သူ တို့အား ဖြစ်စေလိုသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရန် ဆန္ဒ
ပြင်းပြသူ များ၊ တရားဟောပလ္လင်မှာ၊ သာသနာ
ကွင်းထဲမှာ၊ မိမိနေအိမ်မှာ၊ မိမိရုံးငှါန (သို့) ကိုယ်တော်စေလွှတ် သည့် မည်သည့်နေရာမှာ မဆို၊ ကိုယ်တော်အတွက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ အစေခံလိုသူများပင် ဖြစ်လေသည်။
သည်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လူတွေက “ရောင့်ရဲကျေနပ်မှုမရှိတဲ့လူတွေ၊ ကောင်းကင်ဘုံကို အေး အေးဆေးဆေးနဲ့ မသွားခြင်တဲ့လူတွေ” လို့ပြောကောင်း ပြောမည်။ အမှန်စင်စစ် သူတို့တွေက တမန်တော် ပေါလု ပြောသည့်အတိုင်း အထက်အရပ်မှ ဆုကိုရဖို့အတွက် ပျင်းနေသူများ ဖြစ်သည်။ သည်ထက် ပိုပြိး လေးလေးနက်နက် ပြောရလျှင် သူတို့သည် အမြင့်မားဆုံး အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ဆီသို့ သွားရာလမ်းပေါ်၌ ရှိနေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သင်ကော – အဲသည်အထဲမှာ ပါပါသလား? ဟုတ်ကဲ့ဟု ဆိုပါက ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ သင့်အား အောင်မြင်စွာ ပန်းဝင်နိုင်သည့် အပြေးသမားကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်ပေးမည့် စကားတစ်ခွန်းကို ဝေငှလိုပါ သည်။ အဲဒါကတော့ … “ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပထမ ဦးစားပေးပါ။” (Put the word first) ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။
သင့်အနေနဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ဧ၀ံဂေလိဆရာတစ်ဦး (သို့) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် မြတ်၌ ပါဝင်လျက်ရှိသည့် ပထမတန်းအဆင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ ပန်းတိုင် ထားရှိပါက ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှ ပေါ်ထွန်းလာသည့် ဥာဏ်ပညာ (Wisdom) ဖြစ်ပြီး ထိုအရာကပင် သင့်အား ပန်းတိုင်ဆီသို့ အရောက်ပို့ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သည်အရာကား … ရှောလမုန်မင်းကြီး … ၊ သူက သုတ္တံ ၄း ၅-၉ ကို ရေးသားသည့် အချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား နားလည်စေလို သည့် အကြောင်းအရာပင် ဖြစ်သည်။
“ပညာကို ဆည်းပူးလော့။ ဥာဏ်ကို ဆည်းပူးလော့။ သတိမလိစေနှင့်။ ငါ၏ နှုတ်ထွက်စကားကို မလွှဲမရှောင်နှင့်။ ပညာကို မစွန့်နှင့်။ သူသည် သင့်ကို ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။ သူ့ ကို ချစ်လော့။ သင့်ကို စောင့်မ လိမ့်မည်။ ပညာသည် အမြတ်ဆုံးသောအရာ ဖြစ်သည်။ ပညာကို ဆည်းပူးလော့။ ဆည်းပူးသမျှသော ဥစ္စာတို့တွင် ဥာဏ်ကို ဆည်းပူးလော့။
သူ့ ကို အမြတ်ထားလော့။ သူသည် သင့်ကို ချီးမြှောက် လိမ့်မည်။ သူ့ ကို ဖက်ရမ်းလျှင် ဂုဏ်အသရေကို ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ ခေါင်းကို တင့်တယ် သော ဦးရစ်နှင့် ပတ်ရစ်၍ ဘုန်းကြီးသော သရဖူကို အပ်နှံလိမ့်မည်။” (သု၊ ၄း ၅-၉)။
ယေရှုကလည်း သည်အရာကို ပြောလိုသည့်အတွက်ကြောင့် “ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ရှေးဦးစွာ ရှာကြလော့။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ထပ်၍ ပေးတော်မူ လတံ့။” ဟု ဆိုခဲ့သည် (မဿဲ ၆း ၃၃)။
သင့်အနေနဲ့ တကယ်ပဲ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပထမ ဦးစားပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ကျမ်းစာကို မိနစ်အနည်းငယ် အကြာလောက် အပေါ်ယံကြော ဖတ်တာထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် လုပ်ဆောင် ဖို့ လို လိမ့်မည်။ သင့်နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက်၌ နှုတ်ကပတ်တော် အစဉ်ပြည့်ဝနေဖို့ နေ့ရော … အာရုံထဲသို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပို့လွှတ်နေရမည်။
“ဟိုး … နေပါဦး၊ ဒီမှာ ညီအစ်ကို ခုပ်(ပ်)လန်း၊ ခင်္ဗျား ပြောတာ သိပ်မလွန်လွန်းဖူးလား?” သင့်အနေနဲ့ သည်လို မေးကောင်း မေးမည်။ …. ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် ရှင်းပြပါမည်။ တေးဂီတ (Music) ဘာသာရပ်ကို အထူးပြုယူထားသော ကောလိပ် ကျောင်းသား တစ်ဦးကို မေးကြည့်ပါ။ သူ့အနေနဲ့ တစ်နေ့ (လေး)နာရီ ခန့် လေ့ကျင့်ရမည်။ အိုလံပစ်ပွဲမှာ ရေခဲပြင် လျောစီးပြိုင်ပွဲ ၀င်သူတွေအတွက် ဆိုလျှင် တစ်နေ့ (၆)နာရီမှ (၈)နာရီထိ လေ့ကျင့်ရပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာ သူတို့၏ ပန်းတိုင် ဖြစ်သော အောင်မြင်မှု သရဖူ ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးအတွက် သူတို့ဘ၀ကို လုံးဝဥဿုံ အပ်နှံထား ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်လည်း ဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေနဲ့ ၀ိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်မှာ တကယ်ပဲ ထူးချွန်ထက်မြက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လိုပါက ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့စွာဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်အတွက် လုံးဝဥဿုံ ဆက်ကပ်အပ်နှံရပေမည်။ အထူးသဖြင့် လေ့ကျင့်မှု သင်တန်း၏ အစပိုင်းမှာ ဖြစ်သည်။
သင့်စိတ်အာရုံထဲသို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ တစ်ခုပြီး တစ်ခု စိမ့်ဝင် ထိုးဖောက် ဖို့ရန်အတွက် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာ အသံသွင်း တိတ်ခွေများ (သို့) ၀ိညာဉ်တန်ခိုး ဘိသိက် ပြည့်ဝသော ကျမ်းစာ အခြေပြု တရားဟော တိတ်ခွေများ နားထောင်ဖို့ လိုအပ်လှသည်။ ဆိုလိုတာက သင်သွားရာ လမ်းသို့ နားကြပ် ကက်ဆက် (သို့) CD စက်လေး တစ်ခု ဆောင်သွားရမည်။ သင့်အနေနဲ့ လက်တစ် ဖက်က မုတ်ဆိတ်ရိတ် ဂျုတ်ဓါးကို ကိုင်ပြီး အခြားတစ်ဖက်က CD စက်လေးကို ကိုင်ထားရတာလေး ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါမှမဟုတ် သင်၏ ကားထဲမှာ ကက်ဆက် ဖွင့်ထားမည်။ အဆုံးစွန် ပြောရလျှင် သင်၏ အိပ်ယာဘေးမှာ သင်၏ CD စက်ကို နိုးစက် အဖြစ်ပင် ထားရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သင့် တစ်ကိုယ်လုံး (ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်) ကို နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ရွှဲစိုနစ်မြုပ်သည်အထိ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး ပြုလုပ်ရမည်။
သည်လိုလုပ်ဖို့က သိပ်မလွယ်မှန်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်အနေနဲ့ ယေရှုခရစ်တော်၏ မဟာစေခိုင်းချက်ကြီး (The Great Commission) ပြီးပြည့်စုံဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြသည်ဟု ဆိုလျှင် ဇွဲလုံ့လ ရှိရပေမည်။ စာတန်က သင့်ကို အမြဲ ဆန့်ကျင် နှောက်ယှက်မှာ ဖြစ်သည်။ သည့်အတွက်ကြောင့် “တိုက်ပွဲဝင်ရန် ကောင်းစွာ ပြင်ဆင်ထားပါ” လို့ပဲ ကျွန်တော် ပြောချင် သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် သင်၏ တပ်မှုးဖြစ်ပြိး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် ရန်သူများရှိရာ စစ်မြေ ပြင်သို့ သင့်ကို စေလွှတ်မည်ဆိုပါက အထက်ပါအတိုင်းပဲ ပြောရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်သင် လေ့ကျင့် ပြင်ဆင်မှု မရှိဘဲ စာတန်၏ အင်အားစုကြီးနှင့် ရုတ်တရက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ၀င်ရလျှင် ဘယ်လိုအခြေအနေ ဖြစ်သွား နိုင်တယ်ဆိုတာ သင် ကောင်းစွာ နားလည် သဘော ပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်သည် ရှေ့ တန်းစစ်မျက်နှာ၌ ရှိသော ဘုရားသခင်၏ စစ်သည်တော် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။ သင့်ကို အစွမ်းကုန် တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမည့် ရန်သူများကို သင် ရင်ဆိုင်ရမည်။ သူသည် မီးစက်လက်နက်နှင့် သင့်ကို ပစ်မည်။ သင့်ကို တွန်းချဖို့ ငရဲ၏ တမန်ကို စေလွှတ်မည်။ သင်ကျရှုံးဖို့ နည်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မကြောက်ပါနှင့်။ သင့်ကိုယ်သင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် လက်နက် တပ်ဆင်ပြီး အသင့်ပြင်ထားနိုင်ပါသည်။ သင့်ရှေ့ ၌ ဟန့်တားသော ရန်သူမှန်သမျှကို သင် ချေမှုန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အောင်ပွဲရ စစ်သူရဲတစ်ဦး ဖြစ်မှာ သေချာပါသည်။
အရာရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ယနေ့ခေတ်အခါသမယ၌ ဘုရားသခင်အတွက် ထူးချွန်ထက်မြက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ဖို့ရန် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ထားသော သင်နှင့် အခြားသူများအတွက် ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ် ချီးမွမ်းပါမည်။
သင့်ကိုယ်သင် လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သင့်အသက်တာ၌ ရသမျှအချိန် အားလုံးကို အသုံးပြုပြီး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုပါ။ လေ့လာပါ။ ကျက်မှတ်ပါ။ နားထောင်ပါ။ ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းလျက် လက်တွေ့ လိုက်လျှောက်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို မညာမတာ အဆုံးစွန် ဆက်ကပ်အပ်နှံမှု ပြုပါ။
အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပထမ ဦးစားပေးပါ။ များမကြာမှီ အချိန်ဝယ် ခန်းနားထယ်ဝါလှသည့် အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဆုသရဖူတွေ၊ တပွေ့ တပိုက်ကြီးနဲ့ သင် ပြုံးပျော်နေလိမ့်မည်ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချပါ မိတ်ဆွေ။
အိပ်မက်ထဲ၌ ရပ်နေခြင်း (Standing in Your Dream)